MMỌNWỤ, Ọ GỊNỊZỊ? – hoo!haa!!
NCHETA EFIỌNG GA-ABỤ N'ABALỊ ISII ỌNWA NỌVEMBA NILE - BYNL
Mmọnwụ bụ ihe a na-akwanyere ugwu pụrụ iche n’Ala-Igbo. Kaosiladi, dịka omenala ndị ọzọ dị na be anyị si ádá ádà, ọ dịzị ka mmọnwụ enwechazịghị ugwu ka ọ bụ na mmọnwụ anaghịkwa akwanyezịrị onwe ya ugwu.
N’ọnwa gara aga, Gọọmenti Enugwu Steeti nakwa ndị obodo kpebiri Mmachi amachiri mmọnwụ “Akatakpa” nke ndị Ogbodu-aba dị n’okpuru ọchịchị Udenu, Enugwu Steeti.
A kọwara na Mmachi a bụ iji weghachite udo n’obodo ahụ nọ n’ọgbaghara nke metụtara eze obodo ahụ, Igwe Pita Eje nakwa ndị na-eti mmọnwụ ahụ kemgbe afọ iri n’otu gara aga.
hoo!haa!! nọkwa n’izu ụka buo akụkọ maka mmọnwụ na-añụ mmanya Hero n’otu obodo n’Anambara Steeti.
Nke kazị njọ mekwara! Ozi anyị nwetara n’obodo agaghịkwa akpọ aha ya n’Abịa Steeti bụ na mmọnwụ kpughepuru ihu ya ka ya na nwanyị were nwee mkparịta ụka. Nke a ọ bụzịkwa mmọnwụ? Mmọnwụ ụmụaka ma ọ bụ mmọnwụ ndị Nollywood ekwesịghị dị ịkpa udiri agwa a.
N’ụfọdụ obodo n’Ala-Igbo taa, dịka Ndikeliọnwụ dị n’okpuru ọchịchị Orumba Mgbago Ugwu n’Anambara Steeti na eyinyezi mmọnwụ nile akara ejirimara (identification Tag) iji mee ka ọ dị mfe ijide mmọnwụ ọbụla dara iwu ma nyekwa ya ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị.
Nsogbu ụfọdụ a na-enwetazi n’aka mmọnwụ bụ ịkpafe aghara oke nakwa ịkọ ọgwụ aghara aghara. Ee, ime gara gara nakwa ịkọ ọgwụ so na njirimara iti mmọnwụ mana “ihe na – aka mma n’oke n’abọ” ma ọ bụrụ ndị Anambara.
hoo!haa!! na-ekwu na oge eruola mgbe a ga-emepụta iwu gana achịkwa iti mmọnwụ n’Ala-Igbo maka na ndị na- eti mmọnwụ na-awụzị onwe ha nakwa omenala iti mmọnwụ n’ala
Previous Post: ỌJỊ ỤZỌ, HAPỤRỤ ANYỊ ALA ANYỊ – NDỊ NKPORO
Next Post: ANYỊ GA-EKPOCHAPỤ NGWA AHỊA ADIGBOROJA-SON